နေရာတကာနှင့် သူ့အိမ်အပြန်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နေရာတကာနှင့် သူ့အိမ်အပြန်…
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Nov 19, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary, Politics, Issues | 34 comments
မနက်မိုးလင်းတော့ နံနက်စာအဆာပြေလေးစားမယ်ဆိုပြီး လမ်းထပ်ကအသုပ်ဆိုင်လေးသွားတော့… အသုပ်ဆိုင်မှာ ကြားရတာက “အိုဘားမား”တဲ့…
ရုံးသွားဖို့ ကားငှားတော့လဲ… တက္ကစီပေါ်မှာ “အိုဘားမား”တဲ့…
ရုံးရောက်လို့ တနင်္လာနေ့အစည်းအဝေးလုပ်တော့လဲ… လမ်းပိတ်တဲ့အကြောင်းကနေ “အိုဘားမား”တဲ့…
အဲလိုနဲ့… ဂျီတော့မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တော့လဲ… အိုဘားမားတဲ့…
ဂျီတော့စတေ့တပ် မတ်စိတွေမှာလဲ… အိုဘားမားတဲ့
ရုံးက ကားဒရိုင်ဘာတွေကလဲ… အိုဘားမားတဲ့…
ပြည်လမ်းပေါ်က မိတ်ဆွေတွေကလဲ… အိုဘားမားတဲ့…
အခုနေ့လည် ထမင်းစားတော့လဲ ထမင်းဝိုင်းမှာ အိုဘားမားတဲ့…
ဂရုချက်ထဲသူ သူငယ်ချင်တစ်ယောက်ကတော့ နင့်လိုအရက်သမားကြီးက အိုဘားမားကို ဘယ်စိတ်ဝင်စားမတဲ့တုန်းဆိုပဲ…
ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာလဲ အိုဘားမားကြိုတဲ့ ကျောင်းစိမ်းဝတ်ကလေးတွေ…
အိုဘားမားကို မြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူတွေ ဘယ်လိုတွေးတောမှာလဲ…
အိုဘားမားကို မြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကြိုးဆွဲသူတွေ ဘယ်လိုစဉ်းစားမှာတုန်း…
ဒီလိုချွတ်ခြုံကျနိုင်ငံတော်လေးအတွက်… အိုဘားမား ဘာတွေယူလာမှာတုန်း…
အိုဘားမား နိုင်ငံတကာကို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုစည်းရုံးမှာတုန်း…
အိုဘားမားကြောင့် တစ်ချိန်ကရွှေထီးဆောင်းခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို အသက်ပြန်ဝင်လာမှာလား…
အိုဘားမားကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကုန်သွယ်ခွင့်အခွင့်အလန်းတွေ တိုးတက်လာမှာလား…
အိုဘားမားကြောင့် မြန်မာလူထု ယခုထက်ပိုပြီး ဒီမိုကရေစီအကျိုးကို ပိုမိုခံစားရလာမှာလား…
အိုဘားမားကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရေး တဆစ်ချိုးဘာတွေပြောင်းလဲသွားမှာလဲ…
အိုဘားမားကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ ဘယ်လိုဖြစ်လာမှာလဲ…
အိုဘားမားကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး ပိုကောင်းလာမှာလား…
အိုဘားမားကြောင့် မြန်မာလူထုအသိပညာတွေ ပိုလာမှာလား…
တကယ်တော့ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာ အိုဘားမားဆိုတာထက်…
သူ့အိမ်အပြန်မှာ ပြောင်းလဲမယ့်… မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ မြန်မာ့ကုန်သွယ်ရေး၊ မြန်မာ့ပညာရေးကိုပဲ မျှော်လင့်မိပါတယ်…
အချိန်တန်ရင် သူကတော့အိမ်ပြန်သွားမှာပါ… ကျန်ခဲ့မယ့်ကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်ပဲ ဒီမိုကရေစီအတွက်ရုန်းကန်ရဦးမှာပေါ့…
ဒါပေမဲ့လည်း ဒီတစ်သက်အရှင်လတ်လတ်မြင်ရမယ် မထင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးမြင်ရတာကိုး။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပေါ့။
မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာလည်း ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ အရာပဲ။ မျှော်လင့်ကြည့်ကြတာပေါ့လေ။
ဒီနေ့ အိုဘားမား နှိပ်စက်ချက်၊ ရုံးအလုပ်က ဘာမှ မစရသေးဘူး။ :harr:
တော်သေးတာပေါ့..ဒီနေ့ နေက သိပ်မပူလို့… နို့်မို့ဆို အဓိပတိပေါက်ရှေ့မှာ အရှင်လတ်လတ် နေခြောက်လှမ်းသလို ဖြစ်ဦးမလို့…
အနော်လည်း ခုနကမှ ရုံးကိုပြန်ရောက်တာ…တစ်ရုံးလုံး တံခါးပိတ်၊ “We are going to welcome Obama” လို့ စာကပ်ပြီးတော့ကို သွားစောင့်တာ…
တစ်ခြားနိုင်ငံတွေက ဘယ်လိုအမြင်ပြောင်းမလဲတော့မသိဘူး..တို့ ပေါက်ဖော်ကြီးတွေကတော့ သူတို့ထက်ပိုခင်မလားဆိုပြီး စိတ်ပူနေရှာရော့မယ်ထင့်…
အများကြီးမတွေးတတ်ပါဘူး…သူတို့ဆီက တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ပညာသင်တွေများများ သွားနိုင်ရင်ကောင်းမယ်လို့….
ဘာပဲပြောပြော..တစ်ဆင်ခံတွေနဲ့..ဖုန်းတွေနဲ့ ပြောနေတာထက်စာရင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာ၊ လူချင်းတွေ့ပြီး စကားပြောတာက ပိုကောင်းတာပေါ့…
လစ်ဘရယ် အရေခြုံထားတဲ့ အရက်သမားရီးရဲ့ ….
အဲ့ဘဲရီးလာတယ် .. လုံခြုံကြောင်း ငြိမ်းချမ်းကြောင်းပြနိုင်တယ်
သူထောက်ခံတယ်ဆိုရင် ..ဘစ်ဇနက်တေ လိုက်လာကြမှာဟဲ့…
ဘစ်ဇနက်တေ လိုက်လာကြရင် …ခရိုနီတွေ ပိုကြီးပွား ..
အဲ့လေ..အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုတိုးတက် ဂျီဒီပီတွေ တက် …
အကုန် တိုးတက်လာတော့မှာ …
ခုလေးတင် ဒင်းကို မျက်နှာလိုအားရ နိုင်ကျဉ်းတွေ လွှတ်ပေးနေရဘီမလား..
နိကြိုက်တဲ့ ပန်းသီးတို့ နာကြိုက်တဲ့ ဒဲလ် တို့
မကြာခင် လာပီး ရုံးစိုက် တော့မှာကွယ့် …
အန်ကယ်ဆမ်နဲ့ ပေါင်းတာများ …အရှုံးမရှိပါဝူးကွယ်…
စကားမစပ် ရွှေမြွေဟောက် ဆိုလား ..အဲ့ဒါပါခွင့်ရတော့မယ်ထင်ရဲ့ …
ဒီဘဲရီး ၀င်တာကို အကြောင်းပြုပြီး မျောက်ပြဆန်တောင်း လုပ်စားလို့ ရတာတွေ တပုံကြီး အေ့ …
မျက်ရစ်မပါတဲ့ ငတိတွေ မျက်ခုံးလှုပ်နေဘီ ခုဆို .. ညင်းညင်း …အရင်ကလောက်တော့ နှိမ်လို့မရတော့ဝူး…
ဘာဖစ်တယ်… မြစ်ဆုံ ပြန်စမယ် ဟုတ်စ …???
အန်ကယ်ဆမ် နဲ့ တိုက်ပြောပစ်မယ်…
အနည်းဆုံးတော့ လူရှိန်တာပေါ့ကွယ် ..
ဖိန့်ဖိန့်ပေါ့ ဟုတ်တယ်မလား … လောကကြီးမှာ
ဟန်ကိုယ့်ဖို့က အရေးကြီးတာကလား …ဖိန့်ဖိန့်ပေါ့ဗျာ..
အာချီယံမှာ မျက်နှာမာမာနဲ့ ..လေသံကျယ်လို့ရတာပေါ့ …
ဖိန့်ဖိန့်ပါ ဆို … ကျန်းးးးး ဒီကောင်ဒွေ ဒီလောက်ပြောရဲတယ်…
အန်ကယ်ဆန်မ် က နောက်ကွယ်ကနေ ဘယ်လောက် ထောက်ကန်ပေးထားတယ်
မသိဝူး … ကျန်း…. .. အဲ့လိုအဲ့လို ..
ဖိန့်ဖိန့်ပါ ဆို ….
သိရင် အထွန့်မတက်နဲ့ပေါ့အေ …ညည်းကလည်း …
မွှားပါတယ်… ဟောဒီရင်ဘတ်ထဲ ဒူးရင်းသီး သီးနေပါတယ်ဆို…
နေရာတကာ အိုဘားမား ဖြစ်နေတာ ကောင်းတာပေါ့အေ့…
မဖြစ်ရင်သာ ပူရမှာ … လေဘာဒယ်အေ …
၀တဲ့လူများ တယ်လည်း ဂျေ ၀င်သကိုး …
မင်္ဂလာပါ မြန်မာနိုင်ငံ တဲ့ ..ကြက်သရေရှိလိုက်တာ….
ကြည့်ထားဟဲ့ …လစ်ဘရယ် အရက်သမားရီးရဲ့ ……
ဟီလာရီကလင်တန် လာပီးပြန်သွားတော့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲ စာရင်းစစ်ပီးရင် ……
ခုတယောက်ပြန်သွားပီးတဲ့အခါ….. အိုက်ထက်ပိုပီးများမယ့် ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာအုံးမယ်လို့ ထင်မှတ်ပါတယ်။
မျှော်လင့်နေမယ်…………….. ကိုယ့်ရင်မှာနားပါကွယ်……….. သွားမယ်ဆို နေရစ်မယ်….. တောင်းဆို အမြဲတမ်းပြုပါတယ်……….. တခါကချစ်တဲ့……………………..
( နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်(ယနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် မန္တလေး၊ အိုးဘို အကျဉ်းထောင်နှင့် ကလေးမြို့ အကျဉ်းထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက် )
ချာတူးရေ … အကျဉ်းသားတွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရတာ .. … ၀မ်းသာစရာပါ ။
ဒါပေမယ့် စိတ်ပူတာက ၊ သူခိုး ကြမ်းပိုး ၊ မုဒိမ်းသမားတွေ ၊ ပြစ်ဒဏ်ကျခံသင့်သလောက် မကျခံရပဲ လွတ်လာတကတော့ ၊ သိပ်မမိုက်ဘူးလို့ ထင်တယ် ။ ခွေးမြီးကောက်ကျဉ်ထောက်စွပ် စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ လွတ်လာပြီး ၊ အရင်လို ပြန်လုပ်စားလျှင် ၊ ဒုစရိုက်မှုတွေ ပိုများလာနိုင်သလို ၊ လမ်းသွားရင်းတောင် လုံခြုံမှုအတွက် စိတ်ပူနေရတာမျိုးဖြစ်လာတော့မယ် ။
ကူညီဗျဇေ.. ကူညီဗျဇေတွေက .. .ခေတ်များကောင်းလာမလား … အဟဲ
ပြည်ပသို့ အလုပ်သမားများ ပို့ဆောင်ရာတွင် အေဂျင်စီများမှ အစိုးရသို့ FEC ၁၀၀ ပေးသွင်းရသည့်စနစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့စ၍ ပယ်ဖျက်
အခုလာသော အိုဘားမား ခရီးစဉ်နဲ့မည်သို့မည်ပုံ ဆက်စပ်သည်ကို အကျယ်တ၀င့်ရှင်းလင်းရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်…………………..
J ၀င်လိုက်တာဟယ် …. သူများတွေများ မနက်မိုးလင်းကတည်းက အိုဘားမား သံနဲ့ နပမ်းလုံးနေကြတယ် ။
ဒီကဖြင့် အင်တာနက်လိုင်းလေးကောင်းလို့ … သတင်းလေးဖွင့်တုန်း … လာလိုက်တဲ့ အီးမဲ … တချိန်လုံးနောက်က ကြိမ်နဲ့ လိုက်တို့နေသလိုပဲ … အီးမဲ မဖြေတော့ … ဂျီတော့ကနေ ပွတ်ခ်ျလုပ်တယ် .. တော်တိုမယ်ရ အလုပ်တမား ဘွက အထီးကျန်လိုက်တာ … ။ ဟွန့် …..
ကိုဖက်ရေ … ဘာပဲပြောပြောလေ …. ရွေးကောက်ပွဲပူပူးနွေးနွေး အနိုင်ရပြီး မကြာခင်မှာ အခုလို ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုကို သမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့ ရောက်လာတာ ၊ နောက်ပိုင်း အခြေနေတွေပြောင်းလဲဖို့ ၊ လမ်းဖောက်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် ။ ဖွံ့ ဖြိုးပြီး အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုက အရေးပါတဲ့ လူ ၊ ဖွံ့ ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတစ်ခု ကို ရောက်လာတာ နှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက် လမ်းစတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ရတာပါပဲ ။
အို ဘာမှား လို့ လဲ အိုဘားမား
မြန်မာစကားပုံအရ အိမ်သာလို့ ဧည့်လာတယ်လို့ ဘဲသဘောထားလိုက်ပါတယ်။
အဝေးက ဒီလူတွေနဲ့်တစ်သက်လုံး တစ်ဇောင်းစေးနဲ့မျက်ချေး လိုနေခဲ့တော့
ကိုယ်အနီးရှိတဲ့လူကို မြွေစွယ်ကျိုးလို ခနေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလဲ နည်းနည်းတော့လျော့သွားမှာပေါ့။
ရန်သူဖြစ်နေတာထက်စာရင် မိတ်ဆြွေုဖစ်တာက ပိုစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်။
သူလာသည်ဖြစ်စေ မလာသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ဘက် က ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အလုပ်မလုပ်သမျှကာလ
ပါတ်လုံး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ဒုံရင်း ဒုံရင်းဘဲဖြစ်နေမှာပါဘဲ။
နောက်ပိုင်းတိုးတက်တာ မတိုးတက်တာက တော့
လေးပေါက်ရေ .. အလေးအနက် ကိုထောက်ခံပါတယ် ။ အရေးအကြီးဆုံးက ကိုယ်ပါဘဲ ။
တအားမျှော်ကြတာ ရင်လေးပါတယ် ။ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရမှာ ဆိုတာလေး မေ့မသွားကြဖို့လိုပါတယ်
ကိုကြောင်ဝတုတ်ကလဲ အခုရွာထဲလဲအိုဘားမားပဲလေ သူပဲပြောနေပြီးတော့ …….
လူထုရဲ့.. ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ဖြစ်အောင်..ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စီ.. ပြောင်းယူကြပေတော့..
အင်းးး စာတီဖီကိတ်တွေ …. စာတီဖီကိတ်တွေ …. စာတီဖီကိတ်တွေ ….
မီးလောင်သွားတဲ့ စာတီဖီကိတ်တွေ ….
ရေစိုပျက်စီးသွားတဲ့ စာတီဖီကိတ်တွေ ….
ရွေ့ ပြောင်းရင် ပျောက်ရှသွားတဲ့ စာတီဖီကိတ်တွေ ….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အနမ်း နဲ့ အားရပါးရ နှုတ်ဆက် တာ တော့ MRTV4မှာ တွေ့ လိုက်တယ်။
ဘာရက်အိုဘားမားက မြန်မာနိုင်ငံ မင်္ဂလာပါ လို့ အစချီ ပြီး ပြောသွားပါတယ် တဲ့ ဗျာ။
Burma နဲ့ မြန်မာ၊ Myanmar နဲ့ ဘားမား အတူတူ ပါပဲ လို့ အစော ကြီးက ပြောပါတယ်။
ဘာရက်အိုဘားမားက မြန်မာနိုင်ငံ မင်္ဂလာပါ လို့ အစချီ ပြီး ပြောသွားပါတယ် ။
Burma = မြန်မာပြည်ကို ပထမဆုံးလာတဲ့ ယူအက်စ်သမ္မတက အိုဘားမား ဆိုတာ တော်တော်တိုက်ဆိုင်တာပါဘဲ။
တခုတော့ မကျေနပ်ဘူး။ အမေစုကိုသွားတွေ့တုန်းက “နမ်းသွားလို့”။
ဒါပေမဲ့ အမေစုကိုအိမ်တိုင်ရာရောက်သွားတွေ့လို့ အမေစုရဲ့ ပါဝါမသေးလှဘူးပေါ့။
နောက်တခုက ကိုဝတုတ်လေးပြောတဲ့ သူအပြန် မှာ? ဆိုတာလေး။
ကိုယ်တွေ “ရ” ဘို့ ချည်းဘဲ တော့မဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိတယ်။
တနာရီ ဒေါ်လာ ၂သိန်းတန် လေယာဉ်ပျံ အဲ(ရ်)ဖို့ဝမ်း နဲ့ စီ-၁၇ လေယာဉ်ပျံတွေရဲ့စရိတ်၊
လုံခြွုံရေးစရိတ် ဘာစရိတ်ညာစရိတ်တွေ ကျေ အောင် သူတို့မှာလဲ အမြတ်ရှိတယ်။
အဲဒီ ဘက်ကိုလဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်ကတော့ ကိုယ် တော်တော်စောစောကပြောခဲ့သလို လက်ဂျစ်တိမေစီ ရအောင်လုပ်ရမဲ့
အချိန် ရောက်နေပြီ။ ရရင်လဲ အကျိုးရှိမှာ။အနည်းဆုံး ချေးငွေလျှော်တာတွေ၊အတိုးမဲ့ချေးငွေနဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေ
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ယူအက်စ်ရဲ့ လွမ်းမိုးမှု တော့ အနည်းနဲ့အများ ခံရမှာအမှန်။
မဆီမဆိုင် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေ ယူအက်စ်က လူတွေနဲ့ ယူတာသွား ဆက်စက်တွေးမိတယ်။
အသင့်အတင့် ချမ်းသာသွားတာတော့ ချမ်းသာတာပေါ့ကွာ။ အဲ ..လူကတော့။ဇာတ်လမ်းသဘောကိုပြောတာပါ။
အိမ်နားကဟိုမျက်ပေါက်ပိတ်တွေကိုစီးပွါးရေးမှာသာ မင်းအင်အားကြီးမယ် ဟေ့ကောင်ရေ။
စူပါပါဝါဖြစ်ဖို့ကတော့ “ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်” ဆိုပြီး ဘယ်လက်နဲ့ ၂ ခါထောင်ပြသွားတဲ့ အို ဘားမား ပါဘဲ။
အဲဒီတော့ ချုပ်ရရင် နှစ်ဖက်ကြားမှာ လိမ်မာပါးနပ်ရင် တို့နိုင်ငံအတွက်ကြီးဘဲ။
ယာလဲညက် ကြက်လဲမော လုပ်ရမှာ။
လုပ်တတ်ရင် ဒီတချီအပွဘဲ။ ကဲ …ဘဘစိန်ရေ ။
တချို့ကတော့ ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုးအော်တုန်းကအော်ပြီး… အခုတော့လဲ သမ္မတကြီးကျန်းမာပါစေဆိုတဲ့
သူကြီးပြောတဲ့ ပုံသေနည်းအရတော့ အိုကေနေတာပဲဗျာ…
ခက်တာက အချိန်အခါနဲ့ ပုံသေနည်းကို အသုံးမချတတ်မှာကို ဆိုးရိမ်တာပါပဲဗျာ…
အမှတ်မမှားရင်.. ဦးနုခေတ်ကရော.. ဦးနေ၀င်းခေတ်ကရော.. ယူအက်စ်က.. လက်တွဲသွားကြဖို့.. လက်ကမ်းဖူးတယ်..
ဦးနုခေတ်က.. အဲဒီတုံးကဒုသမ္မတလာပြီး.. မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ဖက်မကူးသွားအောင်.. လာဆွဲခဲ့တာ…
ဦးနေ၀င်းလက်ထက်ကတော့. တရုတ်နီခေါ်တဲ့.. ကွန်မြူနစ်တွေကို.. တရုတ်ဖြူ(အခုထိုင်ဝမ်)နဲ့ပေါင်းချဖို့လာတာ…
၂ခါလုံးမြန်မာတွေ.. အူလည်လည်လုပ်.. ငြင်းခဲ့တယ်..။
နောင် ၂၀၁၆မှာ. ဒီမိုကရက်ဖက်က သမ္မတထပ်တင်ဖို့.. မှန်းထားတဲ့.. သမ္မတလောင်း..ဟီလာရီကလင်တန်ပါ.. ထပ်ပါလာတယ်..
ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်ဖက်က.. အင်မတန်သြဇာရှိတဲ့.. ဂျွန်မက်ကိန်းလာထားဖူးတယ်..
သေချာတာတော့ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော်တော်လေး အထောက်အကူကောင်းတွေ ရလာလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ လူငယ်တွေကို ပညာတော်သင်တွေ အရင်ကထက်ပိုပြီး ပေးလာနိုင်သလို မြန်မာပြည် အတွက်လဲ ပညာရေးအထောက်အကူကောင်းတွေ ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး အာဆီယံဒေသတွင်းမှာပါ အရင်ကထက်စာရင် နဲနဲတော့ အရှိန် ရလာမယ်ဆိုတော့ ဥရောပ၊ အမေရိက နဲ့ ဒေသတွင်းကပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာကြရင် စီးပွားရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးလာမှာသေချာတော့ ရင်းနီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေစပြီး တိုင်းပြည်က လူငယ်တွေပါ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များများ ရလာနိုင်တယ်။ ဒီလို ပညာရေး နဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ အတွက် လူငယ်တွေ ကြိုပြင်ဆင် ကြိုးစားထားသင့်တယ် ထင်မိတယ်။ (ကျနော် အမြင် Certificate လောက်နဲ့တော့ နေရာကောင်း ၊ရာထူးကောင်း နဲ့ လစာ ကောင်းကောင်းရဖို့ သိပ်မျှော်လင့်နိုင်မယ် မထင်မိဘူး)..။
နိုင်ငံရေးအရ ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်း တော်တော်များများကို မြင်နေရပေမယ့် ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ဖို့က ဒီလိုအချိန်မှာ ဒေါ်စု ပါးပါးနပ်နပ် နဲ့ အစိုးရကို ကိုင်တွယ်တတ်ဖို့ လိုမယ်ထင်မိပါဂျောင်း…….
M.T Work Shop ရှေ့မှ အလုပ်ရုံကျွမ်းကျင်ဆရာတစ်ဦးအား
နန်း-“ရန်ကုန်မှာနေရတာပဲကောင်းတယ် ကြိုချင်ရင်ချက်ချင်းသွားကြိုလို့ရတယ် အဟင့်”
အကောင့်တွေရဲ့ ကတ်စတန်မတ်စိတွေက “အိုဘားမား”
သြော်…သြဇာသီးပါ့ အဲလေ သြဇာကြီးပါ့ “အိုဘားမား” ဟုဆိုလိုက်မိပါတကားးးးးးးးးးးးး
အိုဘားမားလာတာ ကံကောင်းတာလား…ကံမကောင်းတာလား ဟင်င်င်င်င် ?????
အဲဒီ ကံ အခု အရမ်းခေတ်စားနေတယ်ကွယ်…။
အိုဘားမားတော့ မကြာခင် ဇီးထုပ်ဘွရောက်ပြီး
ကလင်ဒါ ၊ပိုစတာ ၊ တီရှပ် ၊ ခေါင်းစီး၊ ဦးထုပ်
ကံဆိုးရင် ဖိနပ်တောင် ဖြစ်အုံးမဗျား ..